रोकिएलान् राष्ट्रपति? - BBC Nepali - समाचार
पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 29.11.12, 15:07 NST सम्मका समाचार
मंसिर ८ को कदमपछि सबैको नजर शीतल निवासमा केन्द्रित छ
राष्ट्रपतिको कदम लगत्तै राजनीतिक खिचातानी उत्कर्षमा पुगेको जनाउ दिने खालका घट्नाक्रम क्षणभरमै सम्हालिए।
सरकारले राष्ट्रपतिको कदमको प्रतिवाद गर्ने जनाउ दिए पनि तत्काल अप्रिय द्वन्द्वको सम्भावना टरे जस्तो देखिन्छ।
तैपनि राजनीतिक अन्योल चिरिएको छैन।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार सहमतिका निम्ति आफूहरुलाई हद म्याद दिए लगत्तै एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न जाँदा आवेशमा थिए।
फर्किँदाको अभिव्यक्तिका कारण भने आफ्नै पार्टीभित्रबाट उनीमाथि राष्ट्रपतिप्रति नरम भएको अभियोग लाग्यो।
त्यसपछि प्रचण्डको त्यो कथित नरम नीतिप्रति रुष्ट भनिएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईपनि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास गए, राष्ट्रपति कदम विरुद्धको सरकारी पुलिन्दा बोकेर।
फिरेपछि उनले नै राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्व नरहेको स्पष्टिकरण दिए।
आक्रोशले आगो बनेका नेतालाई शीतल निवासले अचानक कसरी शीतल बनाएर फर्कायो?
सल्लाहकार दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो दिन नै राष्ट्रपतिलाई भेटेको भए संचार माध्यममा दुई संस्थाबीच द्वन्द्वका खबर नै आउने थिएनन्।
जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरिएका दुई चर्चित दिन माघ १९ वा पुस १ गते राष्ट्रपतिले नदोहोर्‍याउने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, रौं बराबर पनि कसैले त्यस्तो भ्रम पालेको छ वा सपना देखेको छ भने राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो विल्कुल हुने छैन।
त्यसको अर्थ हो, राष्ट्रपति दलीय सहमति नाघ्ने वा सरकार वर्खास्त गर्ने पक्षमा छैनन्।
त्यसो भएमा सहमतिको प्रयासको चक्र म्याद थपिँदै केही दिन घुमिरहन सक्छ।
स्थिति यति नै सरल हो भने, राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति राम्ररी भेउ पाउन सक्ने चतुर छविका प्रधानमन्त्री किन त्यसरी अत्तालिए?
"रौं बराबर पनि कसैले त्यस्तो भ्रम पालेको छ वा सपना देखेको छ भने राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो विल्कुल हुने छैन"
उनले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग मिलेर आफूलाई कु गर्न लागेको आरोप लगाएका खबर समेत बाहिरिए।
त्यो खबरलाई प्रचण्डले यति गम्भीर रुपमा लिए कि सोमवार विहानै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर त्यसबारे स्पष्ट पार्न लगाए।
राष्ट्रपति र प्रचण्ड दुबै विरुद्ध उनी खनिएका सन्देश छताछुल्ल भए।
आफ्नो सरकारको म्याद सकिएको ‘भारतीय सन्देश’ ले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी उत्तेजित बनाएको हुनसक्ने एकथरी जानकारको विश्लेषण छ।
म्याद दिएर अपमानजनक रुपमा लखेट्न लागिएको आशंकामा उनले आफु निकटहरुसँग बोलेका भनिएका ‘वालुवाटार नछाड्ने’ धम्की पनि त्यतै लक्षित ठानिएको छ।
तर धेरैका बुझाईमा आफैंले काम चलाउ भनिसकेको सरकार बर्खास्त गर्ने संवैधानिक बाटो नरहेकोमा राष्ट्रपतिमा कुनै द्विविधा छैन।
दलहरुको सहमति विना राजनीतिक कदम उठाएर जोखिमको सामना गर्ने मनस्थिति पनि शीतल निवासमा कहीं कतै झल्किन्न।
त्यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिको कदमले परिस्थितिलाई तताई दिएको छ।
माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलका बुझाईमा उनको कदम र देखिएका प्रतिकृयाले राष्ट्रपति, सरकार र दलहरु सबैलाई ‘को कति पानीमा छ’ भन्ने महशुश गराईदिएको छ। र, त्यसले सहमतिको वातावरण बनाउन नै प्रेरित गर्नेछ।
राष्ट्रपतिको कदमले दलहरुलाई ‘सहमति जुटाउन नसके विकल्पले आफैं बाटो खोज्न सक्ने’ डर देखाउन सकेछ भने उनीहरु, सके आफुहरु मध्येबाट नसके पार्टी बाहिरबाट भावी प्रधानमन्त्री रोज्ने विन्दुमा सहमत हुन सक्छन्।
त्यसो भएमा रहर रहेछ भने पनि राष्ट्रपतिका निम्ति राजनीतिक कदम उठाउने बाटो बन्द हुनेछ वा उनले चरम राजनीतिक ध्रुविकरण निम्त्याउने वाध्यताको त्यो बाटो रोज्ने जोखिम पनि उठाउनु पर्ने छैन।